Basa redu - Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.
1. Basa risati ratengeswa
TUBO MACHINERY mainjiniya anoongorora zvinodiwa nemushandisi zvakanyatso, kuona kuti zvese zvinodiwa zvinogona kusangana nenzira kwayo.
2. Kuiswa uye kutumwa
Tendeuka-kiyi yekumisikidza uye kutumwa kweakakwana chubhu zvigayo, mitsetse yekucheka, roll yekugadzira michina
Chengetedzo yekumisikidza uye kutumwa;
Kudzidziswa kwevashandisi 'mahunyanzvi / vashandi panguva yekuraira;
Yenguva refu yekushanda kweguyo, kana ikakumbirwa;
3. Pashure- sale rutsigiro
TUBO MACHINERY inogona kupa seti yeakakwana mushure mekutengesa masevhisi kune vatengi. Mushure mekumisikidzwa uye kutumisirwa, yakazara hunyanzvi hwedzidzo inozopihwa kune vanoshanda uye vashandi vekuchengetedza. Mushure mekutengesa-sevhisi wehunyanzvi anochengeta rekodhi rakadzama reruzivo rwevatengi uye chinzvimbo chemidziyo kumutengi, uye gadzira nguva nenguva yekuvandudza uye yekuvhara-loop yekutevera. Kana paine chero mubvunzo, injinjini yedu yekugadzirisa ichaita mhinduro kune yako foni kubvunza kutenderera nguva, kupa zvigadzirwa zvehunyanzvi nemoyo murefu uye nekungwarira, uye upe rairo kune anoshanda kana vashandi vekuchengetedza.
4. Rutsigiro Rutsigiro
Nyanzvi uye vane ruzivo mainjiniya eTUBO MACHINERY vakagadzirira kubata chero mhando yekuparara.
Pakarepo rubatsiro rwehunyanzvi uye kuraira nhare uye / kana e-mail;
Technical service inoitwa pane yeVatengi saiti, kana zvichidikanwa;
Inokurumidza zvinhu zvemuchina uye zvemagetsi zvinoriumba;
5. Kugadziridza uye Kuvandudza
TUBO MACHINERY ine ruzivo rwakakura mukusimudzira, kugadzirisa kana kugadzirisa akwegura machubhu emagetsi. Kudzora masisitimu anogona kuve akanyorwa uye asingavimbike mushure memakore marefu mumunda. Isu tinokwanisa kupa yazvino muPC, PLC uye CNC yakavakirwa sarudzo sarudzo. Mechiniki uye dzakabatana masystem anogona zvakare kubatsirwa kubva mukugadzirisa kana kutsiva, zvichipa mushandisi chigadzirwa chemhando yepamusoro uye basa rakavimbika kubva pamushini wavo.
Isu, Hebei TUBO Machinery Co, Ltd., kugadzira uye kutumira kunze kwakasungwa chubhu / pombi chigayo, inotonhora roll yekugadzira muchina uye yekucheka mutsetse, pamwe neyezvinhu zvekubatsira kweanopfuura makore gumi nematanhatu, isu takagadzira uye takakura mukuenderana neinogara ichichinja zvinodiwa pamusika. .
With anopfuura 130 rinovira marudzi ose CNC machine equipments, vashandi vanopfuura 200, approx. 45,000 mativi emamirimita epasi nharaunda, TUBO Mashini yanga ichiramba ichisimudzira nekusimbisa kwayo ruzivo-mumunda munguva. Kuchinja uye kutevedzera zvido zvevatengi, kambani inofunga kuti mutengi wayo ane rombo rakavimbika uye rakapindirana.
Wona Zvakawanda Nezvedu